Shabaab Oo meel la arkaayo ku dishay Askari ay qabteen -DAAWO - iftineducation.com
Shabaab Oo meel la arkaayo ku dishay Askari ay qabteen -DAAWO
iftineducation.com – Kooxda Al Shabaab, ayaa waxay ninkaan ku eedeysay in uu ahaa askari ka tirsan Ciidanka Dowladda Somaliya, isla-markaana ay Maxkamadoodu ku xukuntay xukun dil toogasho ah, markii uu qirtay in uu ka tirsan yahay Ciidanka Dowladda, sida ay Shabaabku sheegeen.
Xukun fuliyaha Maxkamada, ayaa wuxuu ku dhawaaqay in ninkaan gacanta lagu soo dhigay, xilli uu si qarsoodi leh ku yimid xaafadiisa oo ku dhow deegaanka Biyo Cadde, oo qiyaastii 25km u jirta Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Toogashadu waxay galabta ka dhacday deegaanka Biyo cadde, waxaana isugu soo baxay dad fara badan oo ka tirsan dadka deegaanka, xilli ay Shabaabku ugu yeereen inay isugu soo baxaan fagaare ku yaala deegaankaasi.
Ninkaan, ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Daa’uud Maxamed Xasan, waxayna Shabaabku da’diisu ku sheegeen 36 sano jir, muddo saddex sano ahna uu ka tirsanaa Ciidanka Dowladda Somaliya.
Laakiin warar madax banaan waxay sheegayaan in Daa’uud Maxamed Xasan uu ahaa 30 sano jir, oo beeraley ah, 5-tii maalmood ee ugu dambeysayna uu gacanta ugu jiray Ururka Al Shabaab.
Heestii soo dadajisay Guurka Nasteexa Indho iyo Fanaan Zaki -Muuqaal
Geele Maxaa qarsanaa uu kashifay -Daawo Wadahadalkan